Spotify bụ a ma ama na mgbe nile Mmanu music gụgharia ọrụ. -Adị kwa ụbọchị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ e ịdenye ha akaụntụ. Spotify ka ugbu ejedebeghị ya ọrụ na ụfọdụ Geographic mpaghara. Ma, ndị mmadụ na-achọ inweta ohere ka Spotify netwọk na-eji gụgharia n'elu ikpo okwu. Na-egbochi ya ebe nke ime mere ka ndị na-eji shortcut ụzọ ga-esi jiri ọrụ a. A na-agụnye hacking, adịgboroja akaụntụ, na proxy na Okwey. All ọrụ ndị a nwere n'ụzọ ụfọdụ mere ngwa dị ka ya enthusiasts. Ebe a na-esonụ ederede anyị lekwasịrị anya ojiji nke 'Proxy' na-eji Spotify ngwa.
Proxy bụ intermediary software n'etiti ahịa na akụ isi iyi (nkesa). The proxy nkesa-ejikọ ndị ahịa na isi iyi. Ma mgbe ahịa na-arịọ maka ụfọdụ ego, na proxy nkesa ejiri achọrọ ikikere na tinye nkọwa iji nye ahịa na rịọrọ faịlụ. Mgbe ụfọdụ proxy sava nwere ike iji na machibido nkesa ohere ka aha njirimara na paswọọdụ nke mbụ onye ọrụ, mgbe ụfọdụ nwa oge akaụntụ a na-eji tinye netwọk otú na-echebe gị amata na ịnọgide na-enwe nzuzo.
Part 1. Gịnị bụ Spotify proxy?
Part 2.Why i kwesịrị proxy?
Part 3.How iji nweta Spotify proxy ọrụ?
Download Spotify music free na TunesGo enweghị Spotify proxy
1.What bụ Spotify proxy?
Bụrụ na nke a Spotify proxy nkesa, onye ọrụ (ahịa) choo ụfọdụ tracks site na proxy nkesa nke elsewise nwere ike ọgaghị adị. The proxy nkesa na-agbakwụnye ma ọ bụ overlaps mbụ ọrụ nkọwa ndị dị otú ahụ na isi nkesa nwere ike ikwe ka ohere ka ahịa ma si otú ahụ ego dị na arịrịọ.
2.Why eme gị mkpa proxy?
N'ihi na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na iji ngwa na ụfọdụ mpaghara ebe ụfọdụ ọrụ ma ọ bụ egwu-adịghị mere dị, ma na ị chọrọ inweta ohere ka ndị faịlụ, ihe nwere ike ime. Gịnị ma ọ bụrụ na i nwere ike ịmụta ma ọ bụ zoo gị n'ezie ọnọdụ na site na ụfọdụ intermediary ngwa ị nwere ike ibugharị ma ọ bụ ga-esi jiri ọrụ ndị a, mgbe ahụ ị ga-achọ proxy ọrụ ime otú ahụ. The proxy nkesa ga oyiri ọnọdụ gị ma ọ bụ adreesị IP na ebe dị iche, nke a ga ugbu a-ekwe ka ndị ọrụ dị maka ojiji na na mpaghara dị ka mma. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ị na-
3.How iji nweta Spotify proxy ọrụ?
Spotify Proxy ọrụ enwere ike ịnweta site dị iche iche proxy netwọk dị na ugwo na free nsụgharị. E nwere 2 iche iche nke nhọrọ: Okwey ọrụ na proxy sava.
Okwey netwọk zoo gị n'ezie ọnọdụ na ike a mebere njirimara na ụfọdụ ọnọdụ nke mere na i nwere ike iji Spotify ọrụ. Ọhụrụ Okwey ọnọdụ ga-enye ọhụrụ adreesị IP ka isi iyi nkesa na mgbe ahụ redirect ndị faịlụ gị usoro ụfọdụ dị ọrụ dị
Ị nwere ike iji na-esonụ usoro itinye proxy:
1. Open ndị na-esonụ faịlụ ọnọdụ D: \_ Profaili \_\_ AppData \_ agagharị \_ Spotify
2. Dezie pref faịlụ
3. Tinye ma ọ bụ gbanwee ndị na-esonụ koodu na faịlụ
network.proxy.pass = "unu Proxy paswọọdụ HERE"
autologin.username = "unu Spotify aha njirimara"
network.proxy.addr = "unu Proxy adreesị @ http"
network.proxy.user = "unu Proxy onye ọrụ"
4. Ugbu a ẹkedori Spotify ngwa, ndị proxy kwesịrị ugbu a na-ọtọ
N'etiti ụfọdụ dị proxy ọrụ dị na weebụ bụ Tunnelbear ngwa. Ọ nọwo na n'etiti a họọrọ ngwa ke States na European ebe. O mewo ka Spotify ọrụ mfe dị ka ọrụ na nwekwara ụfọdụ mpaghara kpọmkwem atụmatụ ike ga-eji ofụri ebe.
I nwekwara ike nweta gị proxy ọnọdụ na ngwaọrụ gị na-agbanwe ha ya na-eji Spotify ngwa na ya atụmatụ.
[Mac] / Ọrụ // Library / Ngwa Nkwado / Spotify / prefs
[Win] C: \_ Ọrụ \_\_ AppData \_ agagharị \_ Spotify \_ prefs
[Linux] ~ / .config / Spotify / prefs - (ekele lildude)
Ndị a ọnọdụ pụrụ inyere gị aka dezie mwube gị.
> Resource> Spotify> Spotify Proxy